China Abicah Isongo futhi Wristbands ifektri abakhiqizi | SJJ
Amasongo ama-Silicone nama-wristband wesiko into enhle, ephansi yokuphromotha esetshenziselwa ukuqongelela imali, umcimbi kanye nemisebenzi yokupha. Yenziwe ngo-100% we-silicone material, non-toxic isikhathi eside futhi esheshayo sokulethwa.
Amasongo Abicahfuthi amabhande esihlakala yimikhiqizo yethu emikhulu, ethandwa kakhulu futhi emhlabeni wonke. Ama-wristbands wrists adume ngekhwalithi ye-premium ne-eco-friendly silicone rubber. Izinto ezingabicah ziyibanga lezemvelo nelokudla, zingathwala ukushisa okuphansi noma okuphezulu, ngakho-keAmasongo Abicahnamabhande esihlakala angasetshenziswa ezindaweni ezahlukene nakuzo zonke izinkathi zonyaka. Amabhande esihlakala abicah abushelelezi futhi athambile ezinganeni, ngakho-ke ayathandwa ezikoleni. Amasongo abicah nawo aguquguqukayo futhi aqinile ngokwanele ukuthi abantu abadala bawasebenzise ekukhuphuleni noma emicimbini efana nezemidlalo, i-carnival noma amanye amaqembu. Ama-logo ahlukene angafakwa embossed, alahliwe, aprintwe noma aqoshwe nge-laser ngokuya ngesicelo sakho. Imiklamo ihlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo zakho zasendle, ukukhombisa imiqondo yakho yama-logo, futhi ehlala isikhathi eside ukuhlala isikhathi eside. I-Abicah IsongoAma-s nama-wristband ngokuvamile enziwa ngosayizi ofanayo wezingane noma wabantu abadala, kepha futhi enziwa ngezifiso ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende.
Ngomlando weminyaka engaphezu kwengu-36, imboni yethu iyakwazi ukuhlinzeka amabhande ezihlakala ezisezingeni eliphakeme namasongo ngesikhathi esifushane. Sinokuhlangenwe nakho okucebile kuma-oda amakhulu ama-Silicone Bracelets kanye nama-wristbands, kepha noma ngabe ama-oda amakhulu noma ama-oda amancane amukelwa nganoma yisiphi isikhathi. Imisebenzi yobuciko yasefekthri izonikezwa ukuvunywa kwakho ngaphambi kwamasampuli noma ukukhiqizwa. Abasebenzi bethu basebenza kahle futhi amantombazane athengisayo asazi kahle isiNgisi. Silangazelele uphenyo lwakho!
Izinto: abicah esezingeni eliphakeme
Usayizi: Osayizi abajwayelekile bangama-202 * 12 * 2 mm kubantu abadala, 190 * 12 * 2 mm wezingane. Osayizi abekiselwe bayamukeleka.
Imibala: Ingafanisa imibala ye-PMS, i-swirl, ingxenye, ukukhanya-ebumnyameni, imibala efanelekile iyatholakala.
Amalogo: Amalogo angaphrintwa, afakwe embossed, alahlwe phansi, axhunywe ngoyinki, i-Laser iqoshwe nezinye
Akukho okunamathiselwe kwi-imeyili.
Ukupakisha: 1 pc / isikhwama se-poly, noma ngokuya nge-customers'request
MOQ: Akukho mkhawulo we-MOQ
Langaphambilini Imisa Izinto Zokubhala
Olandelayo: Izinhlamvu zemali Zempi
Amasongo Ababhikishi AbangamaKristu
Abicah Namasongo Bulk
Abicah Namasongo Kushibhile
Amasongo Enjoloba Abicah
Amasongo E-Silicone Slap
Ama-Keychains Ahleliwe Ngezithombe
Imichilo namabhande e-Lugguage